ကူးစက် ရောဂါ တွေ ကို ကာကွယ် နိုင် တဲ့ ရှားဇောင်း လက် ပတ် – Shwe Yoe
Shwe Let | October 3, 2020 | Knowledge | No Comments
ရှားစောင်းလက်ပပ် (၁)ပိသာ(၂၀)ကျပ်သား၊ ရေ(၁၀)လီတာ၊ သကြား(၂၀)ကျပ်သား၊ သံပုရာသီး(၁၀)လုံး၊ နှမ်းဆီစစ်စစ်(၁၀)ကျပ်သား၊
ရေ(၁၀)လီတာ ကို ပွက်အောင်ကျိုပြီးနောက် ရှားစောင်းလက်ပပ်အနှစ်သား(၁)ပိသာ ၂၀ ကျပ်သားအား ရောကျိုချက်ပါ..အပေါ်ယံတက်လာသည့်အမြှုတ်များအား ဇွန်းဖြင့် ခပ်ထုတ်ပါ…အမြှုပ်များကုန်သည့်အခါ…သကြား(၂၀)ကျပ်သား၊ ဆားနှင့် နှမ်းဆီစစ်စစ်(၁၀)သားရောထည့်ကျိုပါ….နာရီဝက်ခန့်ကျိုပြီးလျင် သံပုရာသီး(၁၀)လုံးအရည်ညှစ်ပြီးထည့်ပါ…(ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားလျင် တပါတ်ခန့် ခံပါတယ်…) နှမ်းဆီစစ်စစ်မရခဲ့လျင် မထည့်ပဲ ကျိုနိုင်ပါတယ်…
အဆိုပါ ရှားစောင်းလက်ပပ်ဖျော်ရည်အား တစ်ပတ်လျင်(၂)ရက်သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်…တစ်နေ့လျင် 0.5 Liter ထက်ပို၍ မသောက်ပါနှင့်။ တန်ဆေး လွန်ဘေးဖြစ်တတ်ပါတယ်…
ယခုရှားစောင်းလက်ပပ်ဖျော်ရည် ကို သောက်သုံးနိုင်ရုံသာမက…မျက်နှာကိုလည်း လိမ်းနိုင်ပါတယ်…ဝက်ခြံတင်းတိတ်၊ မှဲ့ခြောက်ပျောက်ပါတယ်…ဆံပင်ဉီးရည်ထဲသို့ အုန်းဆီလိမ်းသလိုလည်း လိမ်းနိုင်ပါတယ်…ဆံပင်ဖြူသက်သာစေပါတယ်…ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်….သွားကိုက် လျင် ခံတွင်းအနံ့မကောင်းလျင် ပလုပ်ကျင်းနိုင်ပါတယ်….ခံတွင်းအနံ့သက်သာစေပါတယ်….
ရှားစောင်းလက်ပပ်မှာ အစွမ်းထက်တဲ့ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင့် ဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့ အရာတွေ ပါဝင်သည့် အတွက် အရေပြားဆဲလ်တွေကို ထိခိုက်စေတဲ့ free radicals တွေကို ဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းစေပြီး အရွယ်ကို နုပျိုစေတဲ့ အစွမ်းရှိလှပါတယ်,,,
collagen ထုတ်ပေး တဲ့ ဆဲလ်တွေကို လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့အတွက် အရေပြားကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်းတွေ ကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့ ပရိုတင်းတစ်ခု လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှားစောင်းလက်ပပ်မှာ polyphenolsလို့ခေါ်တဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တာကြောင့် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်စေ တဲ့ ရောဂါပိုးတွေဝင်ရောက်ခြင်းကို တိုက်ထုတ်ပေးပါတယ်..ဉာဏ်ရှိ သလို ချဲ့ထွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် မှတ်သားမိသမျှ မျှဝေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…
Mask တပ်ပါ…လက်မကြာခဏဆေးပါ..လူစု လူဝေးရှောင်ကျဉ်ပါ…အိမ်ထဲ မှာ နေထို င်ပါ…တရားထိုင် ပါ..ပုတီးစိတ်ပါ…ရာသက်ပန်သရဏဂုံတည်ပါ…
အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ…အဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာ စားသုံးပါ…ဂျင်းပြုတ်ရည်သောက်ပါ,,,ရှားစောင်းလက်ပပ်ဖျော်ရည်သောက်ကြပါ….
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်တွေ အတိုင်း လိုက်နာ နေထိုင်ကြပါရန် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ၊ တပည့်သားသမီးများအား တိုက်တွန်းနှိုးဆော် အပ်ပါတယ်….
ရေ(၁၀)လီတာ ကို ပှကျအောငျကြိုပွီးနောကျ ရှားစောငျးလကျပပျအနှဈသား(၁)ပိသာ ၂၀ ကပျြသားအား ရောကြိုခကျြပါ..အပျေါယံတကျလာသညျ့အမွှုတျမြားအား ဇှနျးဖွငျ့ ခပျထုတျပါ…အမွှုပျမြားကုနျသညျ့အခါ…သကွား(၂၀)ကပျြသား၊ ဆားနှငျ့ နှမျးဆီစဈစဈ(၁၀)သားရောထညျ့ကြိုပါ….နာရီဝကျခနျ့ကြိုပွီးလငျြ သံပုရာသီး(၁၀)လုံးအရညျညှဈပွီးထညျ့ပါ…(ရခေဲသတ်ေတာထဲထညျ့ထားလငျြ တပါတျခနျ့ ခံပါတယျ…) နှမျးဆီစဈစဈမရခဲ့လငျြ မထညျ့ပဲ ကြိုနိုငျပါတယျ…
ရှားစောငျးလကျပပျမှာ polyphenolsလို့ချေါတဲ့ ဓါတျပစ်စညျးတှပေါဝငျတာကွောငျ့ ကူးစကျရောဂါဖွဈစေ တဲ့ ရောဂါပိုးတှဝေငျရောကျခွငျးကို တိုကျထုတျပေးပါတယျ..ဉာဏျရှိ သလို ခြဲ့ထှငျ အသုံးပွုနိုငျရနျ မှတျသားမိသမြှ မြှဝေ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ…
Mask တပျပါ…လကျမကွာခဏဆေးပါ..လူစု လူဝေးရှောငျကဉျြပါ…အိမျထဲ မှာ နထေို ငျပါ…တရားထိုငျ ပါ..ပုတီးစိတျပါ…ရာသကျပနျသရဏဂုံတညျပါ…
ဆင်းရဲပေမယ့် သူများပိုက်ဆံ အလကားမလိုချင်တဲ့ ပန်းရောင်းတဲ့ ကလေးလေးရဲ့ ချီးကျူး လေးစားစရာ စိတ်ဓာတ်
ရေတွင်း ပြန် တူးကြည့် ပါ ( ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်စေ ချင် တယ် )
ခြေဖနောင့် ကွဲအက် ရခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်း အရင်းများ